Imisa ayay noqonayaan tirada golaha wasiirada RW Cumar? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke ayaa ka hadlay tirada ay noqon doonaan xubnaha xukuumadda uu soo dhisi doono, wuxuuna sheegay inuu soo dhisayo gole wasiirro oo 25 ka kooban iyo wasiir ku-xigeennadooda.
RW Cumar ayaa sheegay in xukuumadda uu soo dhisayo ay xoogga saarayso sugidda amniga, dhismaha ciidamada iyo sidii lagu heli lahaa xasillooni siyaasadeed.
Cumar C/rashiid ayaa xusay in xubnaha uu u soo xulanayo wasiirrada inay noqon doonaan kuwo awood u leh howlaha laga dhowrayo, wuxuuna intaas ku daray inay howsha u taalla dowladda kusoo gaba-gabeyn doonaa mudada u harsan dowladda hadda jirta.
Sidoo kale, ra’iisul wasaaraha cusub ayaa sheegay in golihiisa wasiirrada ay noqon doonaan kuwo isku dheelli-tiran, inkastoo uusan sheegin inay isugu jiri doonaan rag iyo dumar iyo in kale.
RW Cumar oo uu dhawaan magacaabay madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa laga sugayaa inuu soo dhiso xukuumad badesha tiim dhacday ee uu hogaminayey RW hore C/weli Sheekh Axmed.